Jeans Take Shape | The World of Pinkgold
Posted on January 14, 2009 by cuttiepinkgold
ရွေးစရာ ဂျင်းဘောင်းဘီတွေ တစ်လှေကြီးရှိနေတဲ့ ဒီလိုခေတ်မျိုးကြီးထဲမှာ ဂျင်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့ လှလှလေး တစ်ထည်ရဖို့ ဈေးဝယ်ထွက်ရတာဟာ နည်းနည်းတော့ စိတ်ရှုပ်စရာ ကောင်းလှပါတယ်။ ကျွန်မဆိုလည်း ဂျင်းဘောင်းဘီကို အသေကြိုက်တာ။ ဒါပေမယ့် တစ်ကယ်တမ်း ဂျင်းဝယ်ထွက်တဲ့ အချိန်မျိုးမှာဆို ဘယ်ဟာကို ရွေးလို့ ရွေးရမယ်မှန်း မသိပဲ complicated ဖြစ်တတ်တယ်ရှင့်။ အမျိုးသမီး တော်တော်များများရဲ့ အ၀တ်ဗီဒိုတွေထဲမှာလည်း ဂျင်းတွေဟာ နေရာယူတတ်ကြပါသေးတယ်။ ဒေါက်ဖိနပ် ချွန်ချွန်သေးသေးလေးတွေနဲ့ ဂျင်းကျပ်ကျပ်ကလေးတွေသာ ၀တ်မယ်ဆိုရင်.. WOW!! လုံးဝ လန်းသွားပြီပေါ့ရှင်။ ဂျင်းတစ်ထည်ကို ၀ယ်ဖို့အတွက် အဓိက စဉ်းစားရမယ့် အချက်တွေထဲမှာ အရောင်၊ အရည်အသွေး၊ cutting နဲ့ brand တွေကို မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဂျင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ စုစည်းလို့ ရမိသလောက်လေးကို တင်ပြပေးလိုက်တယ်နော်။
ကိုယ်နဲ့ Fit ဖြစ်တဲ့ ဘောင်ဘီမျိုးကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်တတ်ဖို့က လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးပါတယ်ရှင်။ အမျိုးသားတွေကတော့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကွက်တိကြီးကို Fit ဖြစ်နေတဲ့ ဘောင်းဘီမျိုးကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ သာမန် ခန္ဓာကိုယ်မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေကတော့ သမရိုးကျ ဂျင်းဘောင်းဘီ ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ ပိုလိုက်ဖက်ပါလိမ့်မယ်။ အရမ်းကို ခေတ်ရှေ့ပြေးနေတဲ့ ဘောင်ဘီမျိုး မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ တောင့်တင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သူမျိုးတွေ ကျပြန်တော့ boot – cut Style မျိုးကို ၀တ်ဆင်သင့်ပါတယ်တဲ့။ တင်ပါးအရမ်းကြီးကို ကြီးနေတဲ့ သူမျိုးတွေကတော့ အောက်ရှူးတဲ့ ဘောင်းဘီမျိုးကို ၀တ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ခုခေတ်အခေါ် ချက်ပြုတ်လို့ ခေါ်တဲ့ Skinny Jeans မျိုးတွေမဟုတ်ပဲ high – Waist ဖြစ်တဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီမျိုးပေါ့။ ခန္ဓာကိုယ် အောက်ပိုင်းပုတဲ့ သူမျိုးတွေကတော့ အစင်းတွေပါတဲ့ ဘောင်းဘီမျိုးနဲ့ သင့်တော်မှာ ဖြစ်ပြီး ပေါင်လုံးကြီးတဲ့သူတွေကတော့ အရမ်းကိုကျပ်ထုပ်နေတဲ့ ဘောင်းဘီမျိုးမဟုတ်ပဲ အနေတော်ကိုသာ ၀တ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ Low Waist ဘောင်းဘီမျိုးကလည်း သင့်တော်မှာပါ။ ဘောင်းဘီအောက်ဖျားတွေက သိပ်မရှည်ပဲ ဖိနပ်အလယ်နားလောက်မှာ ကျနေတာမျိုးဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ရှင်။
အဲတော့ ဂျင်းဘောင်းဘီတွေ ၀ယ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုမျိုးအချက်တွေကို ရွေးဝယ်ရမလဲ ဆိုတာကိုလည်း တစ်ချက်လောက် ပြောပြချင်ပါတယ်။
Lycra 2% လောက်ပါဝင်တဲ့ ဂျင်းသားကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပါ။ ဒါမှ ဘောင်းဘီတွေဟာ ပြန့်နေမှာဖြစ်ပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကိုလည်း ပေါ်လွင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျင်းဘောင်းဘီကို ဘယ်လို cut လုပ်ထားလဲဆိုတဲ့ အချက်လည်း ပေါ်လွင်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
အညွှန်းတွေဟာ price tap ရဲ့ နောက်ဘက်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ မမေ့ကြပါနဲ့
ဂျင်းဘောင်းဘီတွေကို try ကြည့်တဲ့အခါ ထိုင်ကြည့်ဖို့ကိုလည်း လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှ ဒီဘောင်းဘီဟာ comfort ဖြစ်လား မဖြစ်လားဆိုတာ သိရမှာပေါ့။
ဘောင်းဘီတွေရဲ့ Size သတ်မှတ်ချက်ဟာ Brand တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုးကြား ကွဲလွဲချက်တွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် Size တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ ပုံသေမှတ်ထားတာမျိုးထက် ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေရာကို ရွေးချယ်တာက ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ရှင်။
ပြီးတော့ နည်းနည်းကျပ်တဲ့ ဘောင်းဘီမျိုးကို ၀ယ်ပါ။ ဂျင်းတွေက နောက်ပိုင်းမှာ ပိုပိုချောင်လာတတ်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျင်းတွေဟာ များသောအားဖြင့် အပြာရောင် ဆိုပေမယ့် တစ်ကယ့်စံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အရောင်မျိုးကို ရွေးရတာကျတော့ မလွယ်ပြန်ပါဘူးရှင်။ အဓိက ကတော့ အရောင်ကြာရှည်ခံပြီး ကိုယ်သွားလာချင်တဲ့ နေရာမျိုးနဲ့ အံကိုက်ဖြစ်ဖို့ပဲ မဟုတ်လား။ အရောင်လွင်လွင်လေးတွေကတော့ ပိုပြီး casual ဆန်ပါတယ်။ အပြာရင့်ရင့်ကျပြန်တော့ ညဘက်လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့ အချိန်မျိုးတွေမှာ ၀တ်ဆင်သင့်ပါတယ်တဲ့။ အနက်ရောင်ဘောင်းဘီတွေ ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် သိပ်ပြီးတော့ popular ဖြစ်တာကို မတွေ့ရပါဘူးရှင်။
ဂျင်းထည် တော်တော်များများကတော့ ချည်နဲ့ လုပ်ထားတယ်လို့ ပြောလို့ရပေမယ့် ဆွဲသားပါတဲ့ ဂျင်းမျိုးတွေက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဆွဲသားပါတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကပ်နေပြီး သွားရ လာရတာလည်း ပိုမိုပေါ့ပါး သက်တောင့် သက်သာ ရှိစေပါတယ်။ ဒါမျိုးဘောင်းဘီတွေဟာ အရမ်းကြီး ကျပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ သက်တောင့်သက်သာလည်း ဖြစ်စေတယ်လေ။ ဆွဲသားဖြစ်တဲ့အတွက် အထိုင်အထ လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း အဆင်ပြေစေပါတယ်။
ဂျင်းဘောင်းဘီတွေကို အကောင်းဆုံး ထိမ်းသိမ်းဖို့ နည်းကတော့ ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး ရေအေးအေးနဲ့ လျှော်ဖို့ပါပဲ။ လူတော်တော်များများက ဂျင်းဘောင်းဘီကို လျှော်တဲ့အခါ ဆပ်ပြာမှုန့်တွေ များများသုံးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ မလုပ်သင့်ပါဘူးရှင်။ ဆားတစ်ဇွန်းလောက် ထည့်လျှော်တာမျိုးက အရောင်မလွင့်ဖို့ အထောက်အကူ ပြုပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ ဂျင်းစတိုင်တွေကတော့ တစ်ဖြည်းဖြည်း အနောက်ကို ပြန်သွားနေတဲ့ သဘောမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဒူးနဲ့ ဘောင်းဘီအိတ်အောက်နားမှာ အတွန့်ရာတွေပါတဲ့ ဘောင်းဘီမျိုးတွေ၊ ပေါင်တစ်လျှောက်မှာ အရောင်ခပ်မွဲမွဲ လုပ်ထားတာမျိုးတွေ စတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီတွေဟာ ထင်သလောက်တော့ စတိုင်လ်မမိုက်ဘူးရှင့်။ ကဲ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီမျိုးတွေကို တစ်ချက်လောက် ကြည့်ရအောင်နော်။
Skinny အမျိုးအစားတွေ၊ အောက်ဝ ကျယ်တဲ့ ဘောင်းဘီတွေ၊ အရောင်ပါတဲ့ ဂျင်းတွေ၊ အကုန်လုံးကတော့ မိုက်နေတာ ချည်းပါပဲ။
Skinny Jeans ကိုတော့ ကျွန်မလည်း တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ 2008 မှာခေတ်စားလာသလို မိန်းကလေး တော်တော်များများလည်း ၀တ်လာကြပါတယ်။ ခုတစ်လော ကျွန်မ၀ယ်ဖြစ်တဲ့ ဂျင်းတွေကလည်း Skinny တွေချည်းပဲ။
High-waist Jeans တွေကတော့ ခေတ်သိပ်မစားတော့ပါဘူး။ ကျွန်မလည်း လုံးလုံးကို မကြိုက်ပါဘူးရှင်။ ဒါပေမယ့် Celebrity တော်တော်များများကတော့ တော်တော်လေးကို ၀တ်ကြပါတယ်။ Gwen Stefani, Gwyneth Paltrow နဲ့ Kate Moss တို့တွေပေါ့။
Wide-leg jeans မျိုးတွေကျတော့ ၀တ်ရတာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အရမ်းကို classic ဖြစ်တာပေါ့။
Colored Jeans တွေကတော့ ခုချိန်မှာ အရမ်းကို ခေတ်စားနေပြီပေါ့။
ဂျင်းဘောင်းဘီ အမျိုးအစားတွေသာမက တံဆိပ်တွေလည်း စုံလင်လှတဲ့အတွက် ကိုယ်နဲ့ Fit ဖြစ်တဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဘောင်းဘီတစ်ထည်ကိုရဖို့ တော်တော်လေးတော့ ရှာဝယ်ရမှာပေါ့။ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ တံဆိပ်ကိုပဲ စွဲပြီး ၀တ်နေတာမျိုးထက် Design ကိုဦးစားပေးသင့်တယ်လို့ ကျွန်မက ထင်ပါတယ်ရှင်။ ပြောင်းလဲနေတဲ့ Fashion ရေစီးကြောင်းနဲ့အညီ အပြောင်းအလဲလေးတွေ ၀တ်ဆင်ပါမှ ကိုယ့်စတိုင်လ်ကို ထိမ်းရာလည်း ရောက်တယ် မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် Brand စုံ Design စုံ ၀တ်ဖို့ကို တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
19 ရာစုနှစ်လောက်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ California Gold Rush သတ္တုတွင်း တူးသမားတွေက စုတ်လွယ်၊ ပြဲလွယ်တဲ့ အ၀တ်အထည်မျိုးထက် ခိုင်ခန့်တဲ့ အထည်မျိုးကိုသာ ၀တ်ဆင်ချင်ကြပါသတဲ့။ အဲဒီတော့ Jacob Davis ဆိုတဲ့ အ၀တ်ချုပ်သမားတစ်ယောက်က မစုတ်နပြဲစေတဲ့ ဖျင်ကြမ်းတစ်မျိုးကို ချုပ်လုပ်တီထွင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါတွေက ဒီနေ့မှာ ဂျင်းရယ်လို့ ဖြစ်လာတဲ့ အရာတွေပေါ့ရှင်။ သူက သူ့ရဲ့ အိုင်ဒီယာကို ဆက်ထိန်းထားချင်ပြီး ဈေးကွက်ကိုလည်း ချဲ့ထွင်ချင်တာပေါ့။ ခက်တာက သူ့မှာ ငွေးကြေးကလည်း အဆင်မပြေပြန်ဘူးလေ။ အဲဒီတော့ 1872 ခုနှစ်လောက်မှာ Levi Strauss ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ ဆက်သွယ်မိပြီး ဂျင်းတွေကို အကြီးအကျယ် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 1930 အစောပိုင်းကာလလောက်ထိတော့ ရုပ်ရှင်တွေမှာ မင်းသမီး၊ မင်းသားတော်တော်များများက ဂျင်းတွေမ၀တ်ကြသေးတော့ ခေတ်စားသင့်သလောက် ခေတ်မစားခဲ့သေးပါဘူး။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ ဂျင်းမှဂျင်းပါပဲရှင်။ အရောင်စုံ၊ ဒီဇိုင်းစုံနဲ့ brand မျိုးစုံတွေကြားမှာ ကျွန်မတို့ အိပ်ကပ်တွေထဲက ပိုက်ဆံတွေလည်း ထွက်မှန်းမသိ ထွက်ကျနေလေရဲ့။
strike on January 14, 2009 at 5:26 pm said:
ပင့်ပင့်လေးအခုတလောအရမ်း အရမ်းကိုလမ်းနေတာပဲနော် 😛
chan on January 14, 2009 at 6:11 pm said:
ဂျင်းဘောင်းဘီခေါင်းစဉ်တင်ထားလို့ နေ့အိပ်မက်လည်း စိတ်ဝင်တစားပြေးလာဖတ်တာ.. တော်တော်ဖတ်လို့ကောင်းတယ်…. မဂ္ဂဇင်းထဲက အလှအပကဏ္ဍဖတ်နေရသလိုပဲ.. တစ်ခုပဲ.. ဘိုစာလုံးတွေသုံးတာ နည်းနည်းများနေတာတစ်ခုပဲ…. 😛
aye on January 15, 2009 at 2:30 am said:
In pic with three girls, first2girls are Geri Halliwell and Mischa burton. I'm not sure who is the third girl but I'm sure there is no Gwen Stepani, Gwyneth Parltrow & Kate Moss.
If you did not mean to name the girls in pic, I appologize for my comment.
Pinkgold on January 15, 2009 at 3:14 am said:
I just mention the name of celebrities that love to wear the high – waist jeans, not describing the names of the girls in the pic.